The gauges bụ-adịghị ahụ anya na kokpiiti nke m B777. Kedu ihe m kwesịrị ịme ? (FSX / P3D)
The nlele Boeing777-300.gau, Na mbụ kere FS2004, adịghị ọrụ na FSX-enweghị a kpọmkwem wdg
Iji dozie nsogbu a, ị na-idetuo na mado na wdg « msvcr70.dll »Na FSX bụ isi nchekwa (C: \_ Mmemme faịlụ (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X). Ọ bụrụ na ị nwere otu nsogbu on Prepar3D, a ngwọta ga-arụ ọrụ. Ma, anyị gbalịrị ya na P3D.
« msvcr70.dll »Dị maka free ebe a: http://www.fichier-dll.fr/msvcr70.dll,2740,2740